တရုတ်နိုင်ငံ၏ Universal Android Dvd ကိုထုတ်လုပ်သူ၊ Universal Double Din Android ကား Dvd၊ Universal Android 4.0 ကားရေဒီယို
ဖေါ်ပြချက်:Universal Android Car Dvd,Universal နှစ်ထပ်ဒင်း Android Car Dvd,Universal Android 4.0 ကားရေဒီယို ,Universal Android 4.4 Car Radio,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd
Universal Android Car Dvd ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Universal Android Car Dvd, Universal နှစ်ထပ်ဒင်း Android Car Dvd ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Universal Android 4.0 ကားရေဒီယို R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
၁၂.၈ လက်မ universal tesla PX6 ကားဗီဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Universal တစ်ခုတည်းသောဒင်း Android Car DVD Player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၁၀.၁ လက်မ PX6 Universal Android Car Radio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tesla စတိုင် android PX6 universal ကား DVD ကိုကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android dsp 2din ကားသစ် DVD player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PX6 android တစ်လောကလုံးလည်ပတ်မှုမျက်နှာပြင်ကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၉.၇ လက်မ universal px6 android ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tesla universal px6 android ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android 1din အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ကားရေဒီယိုလှန်လိုက်ပါ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android 9.0 system universal car radio video player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android2din 6.6 လက်မကားတစ်စီး dvd gps  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android နှစ်လုံးသုံးကားတစ်စီး gps player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Universal android 9.0 6.2 "car dvd gps player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android 9.0 2din 6.2 "universal car dvd player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android 9.0 2din universal 6.95 "car dvd gps  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android 9.0 2din 6.95 "universal ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android dual din 6.95 "universal car dvd player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2din universal 7inch full touch car stereo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2din 7inch universal deckless car stereo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2din universal7"deckless car mp5 player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၁၂.၈ လက်မ universal tesla PX6 ကားဗီဒီယို
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 336 / Piece/Pieces
DSP ပါ ၀ င်သည့် Android9PX6 ခြောက်ခုရှိသည့် ၁၂.၈ လက်မ universal tesla ကားရေဒီယို ၁. ဒီပုံစံသည် Android9PX64+ 32G /4+ 64G ဖြစ်သည်။ ၁၂.၈ လက်မအရွယ်ကြီးမားသည့်မျက်နှာပြင်ရှိပြီးညှိနိုင်သည်။ ၂.၂ မျက်နှာပြင်မြင့်သောမျက်နှာပြင်မြင့်မားသော 2K...
Universal တစ်ခုတည်းသောဒင်း Android Car DVD Player
Klyde 1 Din Universal Android ကားဗီဒီယို အင်္ဂါရပ်များ မျက်နှာပြင် Pixel: 1024 * 600 OS: Android9စနစ် CPU: ROCKCHIP PX6 (3399)၊ Cotex A72 + A53,6 Core အဓိကကြိမ်နှုန်း: Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz) RAM: 4GB DDR3 Nand Flash: 32GB / 64GB...
၁၀.၁ လက်မ PX6 Universal Android Car Radio
Klyde 10.1 လက်မ Universal Android Car DVD PX6 64GB အင်္ဂါရပ်များ မျက်နှာပြင် Pixel: 1024 * 600 OS: Android9စနစ် CPU: ROCKCHIP PX6 (3399)၊ Cotex A72 + A53,6 Core အဓိကကြိမ်နှုန်း: Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz) RAM: 4GB DDR3 Nand Flash: 32GB /...
Klyde Android 10 Universal သည်ကားစတီရီယိုကိုလှန်ပစ်လိုက်သည် နောက်ဆုံးပေါ် Android 10 operating system၊4+ 64G memory၊ Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS ဖြင့်ပြန်လည်တပ်ဆင်ထားသောဤ Android Android 10 Universal autoradio...
Tesla စတိုင် android PX6 universal ကား DVD ကိုကစားသမား
Klyde အသစ် ၁၂.၈ လက်မတက်စလာ 100 ° Rotation Android 8.1 PX6 6-Core Car Video အသေးစိတ်ပုံများ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်...
Android 9.0 octa core ၁၀.၁ လက်မ2din universal universal dvd player သည် octa core 64gb rom ၁။ Android 9.02din universal car dvd player - - ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနောက်ခံ - 7dynamic backgrouds ။...
PX6 android တစ်လောကလုံးလည်ပတ်မှုမျက်နှာပြင်ကားစတီရီယို
PX6 android တစ်လောကလုံးလည်ပတ်မှုမျက်နှာပြင်ကားစတီရီယို အသွင်အပြင်: မျက်နှာပြင် resolution: 1024 * 768 IPS OS: Android 8.1 စနစ် CPU: Rockchip PX6 (၃၃၉၉) Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz),6Core RAM - Samsung 4GB DDR3 Nand Flash: 32GB Multi-touch...
၉.၇ လက်မ universal px6 android ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်
၉.၇ လက်မ universal px6 android ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ် အသွင်အပြင်: မျက်နှာပြင် resolution: 1024 * 768 IPS OS: Android 8.1 စနစ် CPU: Rockchip PX6 (၃၃၉၉) Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz),6Core RAM - Samsung 4GB DDR3 Nand Flash: 32GB Multi-touch screen...
Tesla universal px6 android ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ
Tesla universal px6 android ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ အင်္ဂါရပ်များ: • 2DIN Universal အတွက် Tesla ပုံစံ • Android 8.1 စနစ်၊ မြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်းဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ် PX6 ချစ်ပ် 4GB RAM + 32GB ROM • ၁၂.၈ လက်မစူပါ IPS မျက်နှာပြင်၊ HD 1920x1080 နှင့် 4K...
Android 1din အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ကားရေဒီယိုလှန်လိုက်ပါ
Android 9.0 system universal car radio video player
Android2din 6.6 လက်မကားတစ်စီး dvd gps
Android နှစ်လုံးသုံးကားတစ်စီး gps player
2din universal 7inch full touch car stereo
2din universal 7inch full touch car stereo System and Hardware
Android 9.0 2din universal7"deckless car mp5 player parameter များ: - လည်ပတ်မှုစနစ် - Android 9.0 - CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8
တရုတ်နိုင်ငံ Universal Android Car Dvd ပေးသွင်း
၁။ Universal car dvd တွင် din တစ်လုံးနှင့် din ၂ ခု၊ din တစ်ခုသည် ၇ လက်မမျက်နှာပြင်၊ din ၂ ခု ၆.၂ / ၆.၉၅ / ၇ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးကား dvd တစ်ဒန်အရွယ်အစားမှာ ၅၀ * ၁၈၀ မီလီမီတာ၊ ၂ ဒင်အရွယ်အစားသည် ၁၀၀ * ၁၈၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ Universal car dvd သည်ကားတိုင်းကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အရွယ်အစားမှာအထူးကား dvd ထက်သေးငယ်သည်၊ ပို့ဆောင်စရိတ်များစွာသက်သာသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် android 6.0 စနစ် - ကောင်းမွန်သောမှတ်ဉာဏ် managent နှင့် android 6.0 ၏ထိတွေ့မျက်နှာပြင်စွမ်းရည်များမှတဆင့်။ စွမ်းဆောင်ရည်စနစ်ကိုမကြုံစဖူးမြန်ဆန်။ တိကျသောအဆင့်သို့ရောက်စေခဲ့သည်။ ဝဘ်ကိုကြည့်နေစဉ်သင်အကြိုက်ဆုံးဖွင့်ရန်စာရင်းများကိုခံစားနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဂိမ်းများကိုချောချောမွေ့မွေ့ကစားနိုင်သည်။
, သင်တို့အဘို့လွယ်ကူပြီးချောမွေ့စွာအင်တာနက် access ကို browser ကိုအင်တာနက်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ watch, အခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံများအားဖြင့်သင်၏မေးလ်, ကစားဂိမ်းများ, download, apps များ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အညွှန်းစစ်ဆေး, Cost-: 2. က Universal ကားတစ်စီး DVD player မျှဝေ WIFI ဟော့စပေါ့ In-Bulit နိုင်ပါတယ် အခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံများနှင့်ထိရောက်ပါသည်။ ဂူဂဲလ်မြေပုံ၊ IGO၊ Sygic နှင့် Waze မြေပုံကဲ့သို့သောကွဲပြားသောအွန်လိုင်းမြေပုံများကိုသင်အလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။ ဂူဂဲလ်မြေပုံဖြင့်သင်သည်အတိကျဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်လမ်းကြောင်းများ၊ တိုက်ရိုက်ယာဉ်အသွားအလာအချက်အလက်နှင့်အခြားအရာများကိုရနိုင်သည်။
သင်၏လမ်းကိုရှာပါကဘယ်တော့မျှမြန်ဆန်လွယ်ကူသည်။ လွယ်ကူသောဆက်သွယ်မှုစနစ်ကိုထောက်ပံ့သည်။ Android စမတ်ဖုန်းများ၊ ကိရိယာများနှင့်လိုက်ဖက်သော၊ လွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်ထားသောအင်္ဂါရပ်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ကား၏ခေါင်းစီးစနစ်အကြားအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုကိုပေးသည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းကို USB မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်၍ ထပ်တူပြုနိုင်သည်။ အပိုဆော့ဖ်ဝဲမလိုအပ်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်ပြောင်းလဲနိုင်သောနောက်ခံ - 7dynamic backgrouds ။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်လည်းသူတို့၏ဓာတ်ပုံများကိုနောက်ခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Universal car dvd သည်စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ လာမည့်သီချင်းကိုကျော်။ အသံတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားချန်နယ်တစ်ခုသို့ပြောင်းခြင်း။ စတီယာရင်၏နောက်ဘီးကိုလက်အားမချွတ်ဘဲသင်၏ခရီးကိုလုံခြုံမှုနှင့်ပျော်စရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Universal car dvd နှင့်လည်း လိုက်ဖက်သည် dashcams - သင်၏ခရီးစဉ်ကိုအချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးမှတ်တမ်းတင်ပါ။ မောင်းနှင်မှုသည်ပိုမိုစိတ်ချရပြီး ပို၍ လုံခြုံသည်။
Universal Android Car Dvd Universal နှစ်ထပ်ဒင်း Android Car Dvd Universal Android 4.0 ကားရေဒီယို Universal Android 4.4 Car Radio VW Universal Android Car GPS